သင်တို့သည်လည်း Lil Wayne တူအနုပညာရှင်တွေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်. ကိုယ့်ကျော်ကြားဖြစ်နဲ့ငွေရှာဖို့လိုသူအချို့အဆိုတော်တွေရှိပါတယ်. မ Lil Wayne. သူအပေါငျးတို့သကာလ၏အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်လိုလား. သူစားသည်, မြည်း, နှင့်သူ၏ဂီတရှူရှိုက်. သူကမိမိကိုယျကိုနားထောငျ. သူကစတူဒီယိုတှငျနထေိုငျ. သူဖြစ်ကောင်းအများဆုံးအဆိုတော်တွေရေးထားပြီထက်ပို Rhymes မေ့လျော့င်. မိမိအစိတျထဲမှာ, သူအားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးထက်လျော့နည်းတစုံတခုကိုမျှအဘို့အနည်ထိုင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်. အဘယ်ကြောင့်? သူနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်အလိုဆန္ဒအားဖြင့်မောင်းနှင်င်သောကြောင့်.
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့လူကိုနှင်ထုတ်ခံအကြောင်းပြောဆိုကြသောအခါ, သူတို့ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလို. သူတို့ကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-oriented နေသောလူကိုရည်ညွှန်းပါတယ်, သူတို့၏နယ်ပယ်များတွင်အောင်မြင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်. သို့သော်ခရစ်ယာန်များအတွက်မောင်းနှင်ခံရဖို့ပိုရှိပါတယ်? အဘယျသို့ကျွန်ုပ်တို့မှမောင်းနှင်ခြင်းနှင့်အားဖြင့်မောင်းထုတ်ခံရဖို့နေကြပါတယ်? အဘယ်အရာကိုခရစ်ယာန်ကားမောင်းသင့်ပါတယ်ဘယ်မှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းနှင်ရပါမည်? ကောင်းပြီကျနော်တို့ရောမ၌ဤမေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှာတှေ့နိုငျထင် 12.
ပြည့်ပြည့်စုံစုံရောမအတွက်ဧဝံဂေလိတရား၏အယူဝါဒထွက်တင်သောပြီးနောက် 1-11, ပေါလုသည်ယခုကြှနျုပျတို့နထေိုငျသငျ့သ​​ညျပုံကိုပြောပြရန်လှည့်. ပထမဦးဆုံးတကျိပ်တပါးသောအခန်းကြီးကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သင့်တယ်ဘာဖြစ်ရပြီ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ကယ်လွှတ်ပါတယ်, အဘယျသို့ဘုရားသခငျသညျခရစျတျော၌အပြုတော်မူပြီ, ဘုရားသခငျသညျခရစျတျော၌အဘယျသို့ပွုမညျ, စသည်တို့ကို. အခုတော့အခနျးမှာ 12, ပေါလုကကြှနျုပျတို့ပွုသငျ့သ​​ညျအဘယျသို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်တစ်ဦးစုစုပေါင်းပြောင်းကုန်ပြီစေသည်. ရှင်ပေါလုလည်းဧဖက်နှင့်ကောလောသဲ၌ဤမ.
သို့ဖြစ်. သင်တို့ဆီသို့အယူခံ, ညီအစျကို, ဘုရားသခငျ၏ကရုဏာအားဖြင့်, အသက်ရှင်သောသတ္တဝါယဇျပူဇျောအဖြစ်သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတင်ပြရန်, သန့်ရှင်းသောဘုရားသခငျသညျလကျခံ, သင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုးကှယျရာဖြစ်ပါသည်. ဤကမ္ဘာမှတညီတည်းဖြစ်မနေပါနဲ့, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့စိတ်ကို၏သက်တမ်းတိုးခြင်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရ, စမ်းသပ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဘုရားသခင်၏အလိုတော်သည်အဘယ်သို့သိမွငျစခွေငျးငှါ, အဘယျအကောင်းနဲ့လက်ခံနိုင်ကြောင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော. (ရောမ 12:1-2)
ငါ. ကရုဏာဖြင့် Driven ကိုခံရ
ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုဤပြောင်းလဲမှုကိုရသောအခါ, သူကျွန်တော်တို့ကိုစိတျဝငျစား. သူကစိတ်အားထက်သန်စွာအသနားခံ, သူအာဏာပိုင်များတယောလမ်းအတွက်အသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်း. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းသည်အဘယ်အရာကိုကြည့်ရှုတော်ရှေ့မှာ, ငါကသူကိုအရမျးနှစျလမျးကိုအကြည့်အရှုချင်.
သို့ဖြစ်. သင်တို့ဆီသို့အယူခံ, ညီအစျကို, ဘုရားသခငျ၏ကရုဏာအားဖြင့်… (ရောမ 12:1တစ်ဦး)
ပေါလုနထေိုငျသငျ့သ​​ညျပုံကိုပြောပြရန်ကျနော်တို့အကြီးမြတ်ဆုံးသို့မဟုတ်မြင့်မြတ်ဆုံးနေ့တနေ့ဖြစ်ချင် "သောကွောငျ့ကျွန်တော်တစ်ဦးအချို့သောလမ်းနထေိုငျသငျ့သ​​ညျဟုမဆိုပါဘူး,ဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ upstanding အဖွဲ့ဝင်များနထေိုငျသငျ့သ​​ညျကိုမည်သို့ဖြစ်ပါတယ် "သို့မဟုတ်ဖြစ်သောကြောင့်","သို့မဟုတ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်များကိုထက်ပိုကောင်းသှနျသငျ,"သို့မဟုတ်ပင်, "ဘုရားသခငျသညျကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်။ " ဘယ်သူမျှမက, သူကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆျောမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာပေးသည်.
ကမ္ဘာ့အကမောင်းနှင်သည်အဘယ်အရာများအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိပါသည်, ကျွန်တော်အားဖြင့်အဘယျသို့နှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်. မကြာသေးမီကငါသူမနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာစတင်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့တစိတ်တပိုင်းပိုင်ရှင်သူအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှနှုတျဆကျ. သူမသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုနှင့်မည်သို့ခက်ခဲသူမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြောတယ်. ထိုအခါသူမကခဲ့ရှိသမျှကိုကလေးတွေအကြောင်းကိုနှင့်မည်မျှသူမကသူတို့ကိုကိုခစျြပြောတယ်. ထိုမိန်းမသည်မိမိအသက်တာကိုလူအပေါင်းတို့သည်သူမစတင်စီးပွားရေးနှင့်သူမ၏ကလေးများအကြောင်းကပြောသည်. ထိုမိန်းမသည်မိမိမူလတန်းမေတ္တာအဖြစ်သူတို့အားထောက်ပြ, သူမတတ်သမျှလုပ်နေကြများအတွက်သူမ၏လှုံ့ဆျောမှု.
အခုပြောမယ့်ဒဏ်ငွေအရာနှင့်တူပုံရသည်. သူမသည်သူမ၏လေးတွေနှင့်သူမ၏အလုပ်ချစ်သောသူ. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အားခရစ်ယာန်နက်ရှိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုများကလှုံ့ဆော်ခံရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို. ခရစ်ယာန်သည်ငါတို့လှုံ့ဆျောမှုဤလောကတှငျဘာမှနှင့်အတူရပ်လိုက်ဘယ်တော့မှမ. ကျွန်တော်တို့ဒါ သင့် ကိုချစ်နှင့်ငါတို့ကလေးတွေသည်ကျွန်တော်ကြိုးစားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ပင်ကြှနျုပျတို့ပွုလုပျငနျးတှငျမွေ့လျော်ဖို့ကွိုးစားသငျ့. သို့သော်သူတို့၏အမျိုးအဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးလှုံ့ဆျောမှုဖြစ်သင့်ပါတယ်. သူတို့၏အမျိုးအဘယ်သူမျှမကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းသောအဓိကအရာဖြစ်သင့်.
ဤတွင်ရှင်ပေါလုကိုယျ့ကိုယျကိုပြင်ပအရာတစ်ခုခုမှထောက်ပြနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မွကွေီးလှုံ့ဆျောမှုများအတွက်အသက်ရှင်တော်မူသည်. သူကကျွန်တော်တို့ကိုအရမျးနှစျ, ငါတို့သည်တခြားသူတွေကိုလုပျနိုငျဘယ်သို့သောအားဖြင့်, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့ပြုတော်မူပြီဘယ်သို့သောအားဖြင့်. သူသညျဘုရားသခငျ၏ကရုဏာကိုစိတျဝငျစား.
ရှင်ပေါလုသညျဘုရားသခငျကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော်မူပြီဘုန်းကြီးသောဧဝံဂေလိတရားကိုစဉ်းစားစေခြင်းငှါ. အတွက်ကြောင့်, 1:16, ရှင်ပေါလုသည်ဤဧဝံဂေလိတရားကိုကပြောပါတယ်, ကယျတငျတျောမူခွငျးအတှကျဘုရားသခငျ၏ "တနျခိုး, ဂရိမှထို့နောက်ယုဒလူမှပထမနှင့်။ "
သို့မဟုတ်သူအခနျးကွီးလေးစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာသူကပြောပါတယ်, "မင်္ဂလာရှိသူ၏ဥပဒေမဲ့အကျင့်ကိုအပြစ်မှလွှတ်ကြသည်သူတို့သည်ပညာမရှိကြ, အဘယ်သူ၏အပြစ်ကြောင့်အဖုံးအုပ်; မင်္ဂလာရှိသောထာဝရဘုရားသည်မိမိအပွစျကိုရေတွက်မည်မဟုတ်ဘယ်သူကိုဆန့်ကျင်သူဖြစ်၏။ "
သူကပြောပါတယ်ဘယ်မှာဒါမှမဟုတ်သူအခနျးတှငျငါးစဉ်းစားင်, "ဘုရားသခင်ကထိုစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆဲခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံ sinners ခဲ့ကြသည်။ "
သူကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်ဘယ်မှာသို့မဟုတ်သူအခနျးတှငျရှစ်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်, "ဘုရားသခငျသညျဇာတိပကတိအားဖြင့်အားနည်းပညတ်တရားကိုမကျင့်နိုင်ကြဘယ်သို့ပြုတော်မူပြီ. သူ၏ကိုယ်ပိုင်သားပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်…"
ဒါမှမဟုတ်ငါကသူကျအခနျးကိုးစဉ်းစားနိုင်မှန်း, သူက "ကယ်တင်ခြင်းကိုလူ့ခေတ္တခဏအပေါ်မူတည်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဖျောပွထားရှိရာ, ဒါပေမယ့်သနားတော်မူသောဘုရားသခင်၏အပေါ် "
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသနားတျောမူပါအားပေးတော်မူပြီ, သူကျွန်တော်တို့ကိုသနားတျောမူပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်, သူကျွန်တော်တို့ကိုသနားတျောမူအားငါပေးမည်. ကျွန်တော်တို့ဟာမသာပြီးသားလက်ခံရရှိဖူးတဲ့ကရုဏာတရားအားဖြင့်လှုံ့ဆျောခံရသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကရုဏာတရားအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခံယူမည်.
ထိုအခါပေါလုကသနားခြင်းကရုဏာ၏အလငျး၌ပြောနေ, ဤနေရာတွင်သင်အသက်ရှင်နေထိုင်ပုံ. ငါတို့လှုံ့ဆော်ခံရဖို့, ကကရုဏာတရားအားဖြင့်မောင်းနှင်.
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်စားငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုများကမောင်းထုတ်နေကြတယ်, နှင့်အချို့သောအခြားမည်သူမဆိုထက်ပိုခက်လုပ်ကိုင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်တဲ့အလိုဆန္ဒအားဖြင့်မောင်းနှင်နေကြတယ်. ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘုရားသခငျ၏ကရုဏာအားဖြင့်မောင်းထုတ်ခံရဖို့ပါလျှင်, ဤအသနားခြင်းကရုဏာရန်သူတို့ကိုအဘယျသို့မောင်းနှင်ရပါမည်?
II ကို. ကိုးကွယ်မှုမှ Driven ကိုခံရ
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါယဇျပူဇျောအဖြစ်သင်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုတင်ပြ, သန့်ရှင်းသောဘုရားသခငျသညျလကျခံ, မူသောသင်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုးကှယျဖြစ်ပါတယ်။ (ရောမ 12:1b-ဃ)
အခုတော့ရှင်ပေါလုယဇျပူဇျောအဖြစ်သူတို့၏အလောင်းများကိုဆက်သဖို့ရောမကိုပြောပြသည့်အခါ, သူကိုအသုံးပြုသည်ဘာသာစကားဓမ်မဟောငျးကမျြးကိုးကှယျနဲ့ယဇ်ပူဇော်မှုစနစ်ကသူတို့ကိုပြန်ထောက်ပြဖို့ရည်ရွယ်သည်. ဒီတော့ကအကျဉ်းချုံးအကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့
ဘုရားသခငျသညျသနျ့ရှငျးသောဖြစ်ပါသည်. လူသားမဖြစ်. လူသားသညျဘုရားသခငျ၏အထံတော်၌ဖြစ်ထိုက်ပါဘူးသို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်သူ့ကိုချဉ်းကပ်ရန်, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ဆိုးသောသူတို့အုပ်စုတစုကိုလိုက်ရန်လုံလောက်သောသနားတျောမူခဲ့, ဣသရလေ, သူတို့နှင့်ကိုယ်တော်နှင့်အတူဆကျဆံရေးရှိခွင့်ပြုပါရန်. ဒါပေမယ့်သူကသန့်ရှင်းသောင့်နဲ့သူတို့အပြစ်များသောသူနေသောကြောင့်,, သူတို့ပဲသူ့ကိုမည်သည့်နည်းလမ်းအဟောင်းကိုချဉ်းကပ်ဖို့ခွင့်ပြုမရနိုင်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့ရုပ်တုဆင်းတုနှင့်မှားယှငျးတဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြ၏မယ်လို့နှင့်တူသူတို့ကိုယ်တော်ကိုပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်နိုင်ဘူး. သူတို့သညျဘုရားသခငျကိုကိုးကှယျသွားကြသည်မှန်လျှင်ကသူ၏အသုံးအနှုန်းများအပေါ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်. သူတို့ကသာသူ့ကိုသူထွက်ချထားလမ်းကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုနိုင်ကြောင်း.
ဤလူပို့ဆောင်ပြီးနောက်ဒါ, ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုပညတ်တို့ကို ပေး. သူတို့နှင့်ကိုးကှယျအဘို့အတင်းကြပ်လမ်းညွှန်ချက် ပေး.. ဘုရားသခငျသညျရာတဲတော်တည်ဆောက်စေခြင်းငှါပြောသူကိုသူတို့ကိုယ်ကျိုးစနစ်အားပေး၏. သူကသူတို့ထံတော်မှကိုယ်တော်နှင့်ဝန်ကြီးကိုးကှယျနိုငျပုံများအတွက်တင်းကျပ်သောအမိန့်ပေး၏. တိရိစ္ဆာန်များ၏လုပ်ကြံခြင်းအားယဇျပူဇျောဓမ်မဟောငျးကမျြးကိုးကှယျ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း. ဘုရားသခင့ငျ့လူအပေါငျးတို့သညျဘုရားသခငျကိုချဉ်းကပ်နိုင်ရန်အတွက်ဤအယဇျပူဇျောထွက်သယ်ဆောင်ရန်မှာထားတော်မူခဲ့ကြ.
ဤအယဇျပူဇျောခွငျးအားဖွငျ့သူတို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့မိမိတို့အပြစ်နှင့်လိုအပ်ချက်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ယဇ်ညျဘုရားသခငျ၏သနျ့ရှငျးသောသူတို့ကိုသတိပေး. သူတို့အပွစျပွုသညျ့အခါဤအတိရိစ္ဆာန်များသောလူကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြ, သေဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်. တိရစ္ဆာန်သူတို့ကိုအစားအသေခံ. ယဇ်ကိုဘုရားသခင်အားနာခံမှုနေထိုင်ခဲ့တစ်ဦးအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြ.
ဒါကြောင့်သူတို့ကဘုရားသခင်နှင့်အတူဖြည့်ဆည်းနိုင်သောအရပ်စည်းဝေးရာတဲတော်ခဲ့ (ဘုရားသခင့ နေ. ဘယ်မှာအနည်းငယ်တဲကို) နောက်ပိုင်းတွင်ဗိမာန်တော်. ၏သင်တန်းကိုဘုရားသခငျသညျနေရာတိုင်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ဒီသူထူထောင်ကားအဘယ်သို့. သူကသင်သည်ငါ့ကိုညွတ်ပြပ်ကိုးကွယ်စေခြင်းငှါသူတို့ကိုသို့ပြောသည်, ဒီလိုမျိုး, ဤအရပ်ဌာန၌. ရှင်ပေါလုကပြောပါတယ်အခါ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကလူနေမှုယဇျပူဇျောအဖြစ်ဘုရားသခင်အားကျွန်ုပ်တို့၏အလောင်းတွေတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီယဇ်ပူဇော်မှုစနစ်မှတ်မိသင့်တယ်.
ကောင်းပြီ NT ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစေသည်, ဤအယဇျပူဇျောအမြဲတမ်းဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှခဲ့. သူတို့ကအဆုံးစွန်သောယဇျပူဇျောထောက်ပြဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ကြ, ယရှေုသညျ. တိရစ္ဆာန်ဆင်တူ, သန့်ရှင်းမှုရှိရမည်, ယရှေုသညျငါတို့အပြစ်ကြောင့်အပြီးပြည့်စုံသောယဇျပူဇျောခဲ့. ဟေဗြဲဒီအန္တိမယဇျပူဇျောတခါ-for-အားလုံးခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါသည်. ဒါဟာအကြိမ်ကြိမ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်တော့မှ. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရပျ၌ရပ်လျက်, သူကိုအစားအသေခံ. သို့သော်ယဇျ​​ပူဇျောတိရိစ္ဆာန်များနှင့်မတူဘဲ, ယရှေုသညျသုံးရက်အကြာတွင်ကျေးဇူးတော်မှထ, ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူများကိုချေမှုန်း. ဒါကြောင့်ယေရှုကြွလာနှင့်အတူ, ဒီအဟောင်းယဇ်ပူဇော်မှုစနစ်သွားကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
ထိုမိန်းမသည်သူ့ကိုပြောပါတယ်, "ဆာ, ငါသည်သင်တို့ကိုပရောဖကျတဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိ. ငါတို့ဘိုးဘေးများသည်ဤတောင်ပေါ်မှာကိုးကှယျ, သင်မူကားယေရုရှလင်မြို့၌လူကိုကိုးကွယ်အပ်သောနေရာအရပ်သည်ဟုဆိုသည်။ "ယေရှုကလည်း, "အမျိုးသမီး, ငါ့ကိုယုံ, ဤတောင်ပေါ်မှာမဟုတ်သလိုယေရုရှလင်မြို့၌မဟုတ်သငျသညျခမညျးတျောကိုကိုးကှယျကွလိမျ့မညျသညျ့အခါနာရီကြွလာ. သင်မသိသောအရာကိုကိုးကှယျ; ငါတို့သည်ကိုယ်သိသောအရာကိုကိုးကှယျ, ကယျတငျတျောမူခွငျးအဘို့အယုဒလူတို့ကနေ. သို့သော်တစ်နာရီကြွလာ, ဒီမှာအခု, စစ်မှန်တဲ့ကိုးကှယျစိတျဓာတျနှငျ့သစ်စာရှိအခမညျးတျောကိုကိုးကှယျမည်သည့်အခါ, ခမညျးတျောသညျကိုးကှယျဖို့ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုးကိုရှာဖွေလျက်သည်. ဘုရားသခင့ဝိညာဉ်ဖြစ်၏, သူ့ကိုဘုရားကိုကိုးကွယ်သောသူတို့အစိတျဓာတျနဲ့အမှနျတရားကိုကိုးကှယျရမယျ။ " (ယောဟနျသ 4:19-24)
ဤမိန်းမဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုသည်ယုဒလူဖွစျကွောငျးကိုယူဆ, သူကသူ့ဗိမာန်တော်မှာယေရုရှလင်မြို့၌ကိုးကွယ်ချင်တယ်. ဗိမာန်တော်ခဲ့, ဒီအချိန်မှာ, ဘုရားသခင်သည်သူ၏လူမျိုးကိုကိုယ်တော်ထံသို့ချဉ်းကပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ရာအရပ်. ကောင်းပြီသညျယရှေုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမိမိအသေမင်းနှင့်ကြောင်းစေသည်, အသစ်တစ်ခုကိုအချိန်လာသေး၏.
ငါတို့သည်နောက်တဖန်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအဖို့အထူးသဖြင့်တိရစ္ဆာန်နှင့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရပ်ဌာန၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူတွေ့ဆုံဖို့ရန်ရှိသည်. ကျနော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဘုရားသခင်နှင့်အတူတွေ့ဆုံရန်နိုင်! ယေရှု၏အသေခံခြင်းနှင့်အတူ, သူတို့အားယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်ပယ်ရှားပြု. ယရှေုသညျမသာယဇ်ဖြစ်သတည်း, ဒါပေမယ့်သူကဟာယယဇ်အဖြစ်ပျက်ဘယ်မှာအသစ်ဗိမာန်တော်သည်. ငါတို့သည်ဘုရားသခဝပ်ကိုးကွယ်ရန်သူဖြစ်ရမည်ရာအရပ်၌ခရစ်တော်၌ရှိ. ယဇျကောဖြစ်ခြင်းအပြင်, နှင့်ဗိမာန်တော်, ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယဇ်ပုရောဟိတ်သည်. သူသညျဘုရားသခငျ, ငါတို့၏နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်သင်ကပုရောဟိတ်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်တိရစ္ဆာန်, ဘုရားသခငျသညျကိုးကှယျဖို့ဒါမှမဟုတ်အဆောက်အဦး. သင်လိုအပ်အားလုံးသညျယရှေုဖြစ်ပါသည်! သင်သည်ဤအရပ်၌ယနေ့နှငျ့သငျသညျယရှေုကိုသိမထားဘူးဆိုရင်, ငါနောင်တရရန်သင့်အားအားပေးချင်နှင့်ယုံကြည်.
-ကျွန်ုပ်တို့၏ bodiesThe ကျမ်းပိုဒ်ငါတို့သည်ငါတို့၏အလောင်းတွေကိုတင်ပြဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်. ယခုငါနည်းလမ်းသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်များနှင့်ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်သည်ဟုမထင်ကြဘူး. ငါပေါလုသည်အခြေခံအားဖြင့်နည်းလမ်းစဉ်းစား, ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကမ်းလှမ်းရန်မဟုတ်, ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အားတက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပြင်လုံးကိုတည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေတပြင်လုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျနော်တို့ဆက်ကပ်နိုငျသောယဇ်ဖြစ်သတည်း. ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကိုဆက်ကပ်ဖို့ပါပဲ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်လျက်ရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိသမျှသည်ဘုရားသခင်မှ.
လောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. y'all တချို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြာသေးမီကဘွဲ့ရနှင့်ဘွဲ့လောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေရတယ်. သူတို့ကမိမိတို့ကိုယ်၌အကြီးစွန်းတိုင်အောင်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်အချို့သောလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေများမှာ, ကလေးကစားစရာများကဲ့သို့. သူတို့ကစားစရာနှင့်အတူဆော့ကစားနိုင်အောင်တယောက်ယောက်ဟာကစားစရာပေးခြင်း၏တပြင်လုံးကိုအမှတ်ဖြစ်ပါသည်.
ထိုအခါဆုလက်ဆောင်တစ်ခုဒုတိယကြင်နာရှိပါတယ်. ထိုလက်ဆောင်များအခြားအရာတစ်ခုခုတဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်. ဒါကြောင့်သင်တို့တွင်အချို့သောရုံလ​​ောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေအဖြစ်ငွေအများကြီးဘွဲ့ရများနှင့်လေကြောင်းကဒီမှာရှိတယ်. ယခု, သငျသညျမိမိတို့ကိုယ်၌အဆုံးအဖြစ်သူတို့အားငွေကြေးလက်ဆောင်များကိုကုသလျှင်အဘယျသို့? သငျသညျနောက်ခံပုံအဖြစ်စစ်ဆေးမှုများနှင့်ငွေသားအသုံးပြုလျှင်အဘယျသို့? ဒါကတစ်ဦးစွန့်ပစ်ပါလိမ့်မယ်နဲ့လှူအမျက်ထွက်ပါလိမ့်မယ်.
ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်, သငျသညျလကျဆောငျတ၏ပထမဦးဆုံးမျိုးကိုအပ်ပေးတော်မူခြင်းကိုခံရဘယ်တော့မှလိမ့်မည်. သငျသညျရတိုင်းတစ်ခုတည်းဆုလက်ဆောင်, အခြားအဆုံးမှတစ်ဦးနည်းလမ်းများအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ရည်ရွယ်သည်. ဒါကအဆုံးသင်သည်သင်၏အသက်တာနှင့်အတူဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်မယ်လို့ဖြစ်ပါသည်.
ရှင်ပေါလုသည်ဤနေထိုင်သောယဇျပူဇျောသညျဘုရားသခငျအဘို့သန့်ရှင်းများနှင့်လက်ခံနိုင်ဖွယ်ဖြစ်ရကြမည်ကပြောပါတယ်. ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဓမ်မဟောငျးကမျြးယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်, ဘုရားသခင့တိကျတဲ့လမ်းညွှန်ချက်များရှိခဲ့. ဟာယယဇ်အများအတွက်တကသန့်ရှင်းသောတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်, လူတစ်ဦးနောင်တရနှငျ့ဘုရားသခငျကိုနာခံဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ခဲ့ရတယ်, စသည်တို့ကို.
ငါတို့အဘို့အဒါ, ကျွန်တော်တို့လူနေမှုယဇျပူဇျောအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူဇော်သက္ကာကိုဖွင့်. ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်ကြငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပေးရ? ဘုရားသခငျသညျခရစျယာအသက်ရှင်ရန်ယခုသည်မည်မျှများအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ပေးတော်မူပြီ. သူကကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်တော်အားနှစ်သက်စေလိမ့်မည်ဟုလူနေမှုပုံစံစတဲ့အမျိုးအစားကိုကပြောသည်င်. ကြှနျုပျတို့သညျဤသည်အလွန်အခနျးကွီး၏ကျန်မှာကြည့်ရင်, ပေါလုကတူအဘယျအထွက်ကို တင်. စတင်မြင်.
ကျမ်းပိုဒ်များတွင် 3-8 သူတကိုယ်လုံး၏ကောငျးကြိုးအတှကျဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးတော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းပြောသွား. ထိုအခနျးငယျမြားရှိ 9-21 သူအချင်းချင်းချစ်စေခြင်းငှါရေ​​ာမအားပေး, သူတို့ကခြုံငုံအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖို့ဘယ်လောက်၌သူတို့ကိုနှိုးဆျော.
ကျနော်တို့ဧဖက်၌ဤလည်းမြင်4ပေါလုကတာဝန်ခံ၏ဤတူညီသောကြင်နာပေးသည်အခါ,. သူဟာဧဖက်အတွက်အယူဝါဒထွက်ရေးသားထားပါတယ် 1-3, ပြီးတော့အခနျးမှာ4သူနဲ့အတူတူပါပဲပါဘူး. သူကသူတို့အသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လောက်သူတို့ကိုပြောပြစတင်သည်.
သူကစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကြိုးပမ်းရန်သူတို့ကိုကိုပြောတယ်, သူသညျဘုရားသခငျကိုသူတို့ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်း၏မျက်နှာကို ထောက်. အမျိုးမျိုးသောလက်ဆောင်များကိုပေးတော်မူပြီသောသူတို့ကိုအားပေး. ထိုမင်းသည်အချင်းချင်းတည်ဆောက်ခြင်းအတူတကွအလုပ်လုပ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကြောင်းပြောသွား.
အဝန်း. ငါရောမနှင့်ဧဖက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကူညီပေမယ့်သတိထားမိမှာမနိုင်, ပေါလုသည်ကိုယ်ခန္ဓာအသက်တာဖြင့်စကားပြောစတင်ခဲ့သည်. သငျသညျသင့်အဖြစ်သငျသညျယဇျပူဇျောအဖြစ်သင်၏အသက်တာကိုဆက်ကပ်မနိုင်, အထီးကျန်နေထိုင်နေစဉ်. ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုလစျြလြူရှုရန်သင့်အသက်အဘို့ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
သူကအခန်းငယ်ထဲမှာပေါ်တတ် 17-29 သူတို့သင်ခဲ့ဖူးတဲ့အရာနှငျ့အညီသောလမ်းအတွက်အသက်ရှင်ရန်သူတို့ကိုအားပေးဖို့နဲ့သူတို့အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူခဲ့ကြရတယ်အဖြစ်ခှငျ့လှတျဖို့. ထိုမင်းသည်အခနျးတှငျအပေါ်နှင့်အပေါ်တတ် 5.
ဘုရားသခငျသညျသူ့ကိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ငှါငါတို့ကိုခေါ်ခဲ့သည်, သောသန့်ရှင်းခြင်းကိုဆိုလိုသည်. သူက "။ ငါသည်သန့်ရှင်းသောဖြစ်ကြောင်းကိုအဖြစ်သန့်ရှင်းသောအဖြစ်" ကျွန်တော်တို့ကိုပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒါမကြာခဏကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည်သန့်ရှင်းသော၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကြည့်ရှုမယ့်. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့အဘို့အအချို့သောအားပေးမှုများ…
"ထို့ကြောင့်, မည်သူမဆိုခရစ်တော်၌ရှိလျှင်, သူသစ်တစ်ခုဖန်ဆင်းခြင်းသည်. အဟောင်းကိုကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်; ကှ္ဂျကှ္ဂျ, အသစ်ရောက်လေပြီ။ " (2 ကောရိန္သု 5:17)
သငျသညျအဘယျသို့ပွုပါသူတို့ရဲ့မိဘကပြောပြနေတဲ့ကလေးကိုမြင်လျှင်လျှင်သင်အဘယ်သို့ပြုရပါလိမ့်မယ်? ပတ်ပတ်လည်၎င်းတို့၏မိဘများမိန့်အိမ်တအိမ်ပတ်ပတ်လည်တွား? သငျသညျသူတို့အရှုးခဲ့ကြထင်ပေ! အဘယ်ကြောင့်? သူတို့မိဘကြောင့်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကကလေးများကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်နေကြတယ်. လူအခြို့သောအာဏာရှိသည်တဲ့အခါဝမ်းနည်းစရာင်, သူတို့ကို၌ကျင်လည်ဖို့ငြင်းဆန်ခွင့်ထူးပေမယ့်. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်အပြစ်၌အသက်ရှင်ရန်အဘို့အဒါဟာပင် crazier ဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကယျတငျခွငျးသို့ရောကျသောအခါ, ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်မွေးဖွားခဲ့ကြ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအသစ်သတ္တဝါများဟုအမည်တပ်လုပ်. ငါတို့သည်ဤဘက်ယမ်းရန်ရှိသည်. ကျွန်တော်တို့အများစုကနေဆဲပဲအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုအတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုစဉ်းစား. ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်သား, ငါတို့မူကားအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုထက်ပိုပါတယ်. သငျသညျကမျြးစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်ထက် Way ကိုပိုပြီး, သငျသညျကမျြးစာကိုကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းသူတို့နှင့်ဘုရားသခင်နှင့်တစ်ဦးတော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်တရားမျှတသားကိုပဌနာကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျပွစျမှားတဲ့အခါမှာ, ယခုသင်တို့နေသောဖြစ်ခြင်းကြသည်မဟုတ်. သငျသညျပြန်သင်ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုတဲ့သူသွားကြသည်. သငျသညျဓမ္မသစ်ကျမ်းအက္ခရာများဖတ်လိုလျှင်, သင်တမန်တော်အမြဲပြန်သူတို့ရဲ့ဟောင်းလမ်းမှမသွားရပ်တန့်ဖို့ခရစ်ယာန်တွေကိုပြောပြကြသည်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဟာသောသူတို့သည်နောက်တဖန်နေသောမဟုတ်ကြောင်းသူတို့ကိုသတိပေးနေကြပါတယ်.
ဒါကြောင့်တကယ်သူတို့၏မိဘများကိုနာခံဖို့ငြင်းဆန်သောသူသည်ဤအခန်း၌တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိစေခြင်းငှါ. ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုအားနာခံရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်ထိုသူတို့အားတင်ပြရန်. ကိလေသာလွန်ကျူးအကြံအစည်တွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့သူတယောက်ယောက်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်. ဘုရားသခင်ကမှဖွင့်နှင့်စိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုခေါ်. တကယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသောသူတစ်စုံတစ်ဦးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်. ဘုရားသခင့မေတ္တာနှင့်မသနားတျောမူဖြစ်သငျသညျတောင်းဆိုနှင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကိုယ့်ဘုရားကျောင်းလာရန်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး. ဘုရားသခငျသညျခရစျတျောကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်.
c ကို. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဝန်ဆောင်မှု
ထိုအခါပေါလုသည်နှင့်အညီ, ကိုးကှယျဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအစဉျအမွဲတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားလူတဦး၏အသက်တာကယ်တင်တော်မူ၏ဘယ်မှာသူတို့အားရုပ်ရှင်များမြင်သောနောက်သူတို့ပဲနေ့တိုင်းအားလုံးနေ့၌သူတို့ကိုအတိုင်းလိုက်နာကြပါပြီ? Matrix လိုပဲ 2. ကောင်းပြီညျဘုရားသခငျ၏ကရုဏာငါတို့၏ကိုယ်တုန့်ပြန်အဖြစ်ကောင်းစွာအစွန်းရောက်များနှင့်အစွန်းရောက်ဖြစ်သင့်.
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတစ်ဒေါ်လာစျေးပေးလျှင်ငါပြုံးစေခြင်းငှါ,, သငျသညျအကြှနျုပျကိုသစ်ကိုရှပ်အင်္ကျီပေးမယ်ဆိုရင်ငါဖြစ်နိုင်သင်၏လက်ကိုလှုပ်ခါမယ်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုသစ်ကိုစာအုပ်ရလျှင်ငါဟာလေလုယဆူညံအော်ဟစ်စေခြင်းငှါ. သို့သော်သင်သည်ငါ၏အပြစ်များကိုမှငါ့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ငါ့ကို unearned ထာဝရအသက်အကတိပေးလျှင်, တစ်ခုတည်းသောဆင်ခြင်တုံတရားတုန့်ပြန်သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဘဝတစျခုလုံးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်. သောငါ၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကစကားလုံးများ၏အစဉ်အလာသဘောအရမောင်းနှင်နေကြတယ်. ကျနော်တို့အောင်မြင်ချင်တယ်; ကျနော်တို့လှေကားကိုတက်ချင်. ထိုအကောင်းတစ်ဦးအရာပါပဲ. ဒါပေမယ့်သင်သေချာစနစ်တကျကြိတ်နေလုပ်သင့်တယ်. သင်သည်သင်၏အောင်မြင်မှုနှင့်အဆင့်အတန်းနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန် Are? သို့မဟုတ်သင်သည်ဘုရားသခင်ကိုးကှယျနှငျ့အတူစိုးရိမ်နေကြ?
ထိုအသင်တို့အဘို့အဘယ်သူကိုကြိတ်နေကြပါတယ်? ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကအလွန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများ '' ခွင့်ပြုချက်များအတွက်လိုအပ်ချက်ကမောင်းနှင်နေ. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုငါတို့သည်ငါတို့၏အဆွေတို့အဘို့ကောင်းသောကြည့်ရှုထို့ကြောင့်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်. ထိုအခါငါတို့တှငျအခြို့သောင့်ကိုယျ့ကိုယျကိုနှစ်သက်ဒါကြိုးစား. ငါတို့မူကားကြိတ်နှင့်ငါတို့မိသားစုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိတ်တက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုမဖြစ်သင့်ကြည့်ရှု, သို့မဟုတ်အသင်းတော်, သို့မဟုတ်ကိုယျ့ကိုယျကို. ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်အဘို့စပါးကိုကြိတ်. ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တော်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတက်ရာပူဇော်သက္ကာနေကြတယ်. သငျသညျအဓိကအားဖွငျ့ဘုရားသခငျသထက်အခြားတစုံတယောက်မျှရန်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုတက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း၏အပြစ်ရှိကြောင်းများမှာ. ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်, လူမသို့မဟုတ်သူကိုပေးနိုင်ပါသည်ဘာမှ.
သင်ပြုသမျှကို, ပျူအလုပ်လုပ်, သခင်ဘုရားအဘို့နှင့်မလူတို့သညျအဘို့အဖြစ်, သခင်ဘုရားကနေသင့်ရဲ့ဆုလာဘ်အဖြစ်အမွေကိုခံယူမည်ဟုသင်တို့ သိ.. သင့်အနေဖြင့်သခင်ခရစ်တော်၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်နေကြပါတယ်။ (ကောလောသဲ 3:23)
III ကို. အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရ
ညီအစ်ကို, ညီအစ်မကြှနျုပျတို့သညျဤလောကီထဲကကိုခေါ်ပြီ. ရှင်ပေါလုကဒီမှာ "လောက" အကြောင်းပြောသွားလိုက်တဲ့အခါ, သူကငါတို့တှငျနထေိုငျအမွကွေီးနှင့်ကမ္ဘာ၏မကောင်းသောလမ်းကိုရည်ညွှန်းသည်. သူကငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ကိုမြင်လျှင်ဖို့အသုံးပြုနေစစ်ဆင်ရေး၏အပွစျရှိ mode ကိုအကြောင်းပြောနေတာင်. အခြားဘာသာကို "ပစ္စုပ္ပန်အသက်အရွယ်။ " ဟုပြော
ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်ပစ္စုပ္ပန်အသက်အရွယ်ဘုရားသခင့ဆီသို့ဦးတည်ပုန်ကန်မှု၌ရှိ၏. ကျွန်တော်တို့အများစုကနေဆဲပဲအချို့အကူအညီလိုအပျသောငါတို့မိတ်ဆွေအဖြစ်ဤလောက၏စဉ်းစား. လုံးဝမဟုတ်ဘူး. ငါတို့သည်ဤအသက်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသင့်. အကြှနျုပျတို့သညျဘုရားသခငျ၏လူအဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ဦးကဤကမ္ဘာကိုအလင်းနှင့်၎င်း၏နည်းလမ်းများဖြစ်ရကြမည်ဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်, ကျွန်တော်ကယ်တင်သောဧဝံဂေလိ၏ကြွေးကြော်ဖြစ်ရကြမည်.
ကျနော်တို့ကကမ္ဘာကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့နိုင်ရန်အတွက်ကြိုးစားရန်မလိုပါ. ဒါဟာကိုယ့်ဖြစ်ပျက်. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးစားနေဘဲကျနော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်သြဇာလွှမ်းမိုး. ဒီအရာရဲ့ A ကောင်းဆုံးဥပမာအားလိင်တူဆက်ဆံခြင်းများကဲ့သို့ပူသောကိစ္စများဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်အခြားပြည်နယ်ကိုတက်ကြည့်ရှုနေ့တိုင်းလိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်ပြုနေသည်. ထိုမီဒီယာ, နှင့်ပညာတတ်, နှင့်အတွေးခေါင်းဆောင်များအားလုံးလိင်တူချစ်သူများ၏လက်ခံမှုဘို့တွန်းအားပေးနေကြသည်. ထိုသူအပေါင်းတို့ကသူတို့နှင့်အတူသဘောတူဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားရပ်တည်ချက်အလျှော့ပေးလိုက်လျောဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိအားပေးနေကြပါတယ်. ထိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပြောမည်, ကျွန်တော်တို့ကိုကဲ့ရဲ့, ကျွန်တော်သဘောတူသည်အထိ bigots တူကျွန်တော်တို့ကိုပြုမူဆက်ဆံ. ကမ္ဘာ့တွန်းအားပေးအားကောင်းနေ. ဒါဟာအလွန်အားကြီးသောလက်ရှိဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လက်ရှိနှင့်အတူ float ရန်မလိုပါ. ဘုရားသခင့လက်ရှိဆန့်ကျင်သွားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီ.
လိင်တူချစ်ခြင်းတစ်ခုလွယ်ကူတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အကွောငျးဘာ, သို့မဟုတ်လောဘ, သို့မဟုတ်မာနထောင်လွှား? သူတို့သညျလောကီသားတို့သည်မိမိတို့နည်းလမ်း, ဘုရားမ၏. ထိုအခါငါတို့သည်ဤလောကတညီတည်းမရနိုငျ.
ရဲ့ကောလောသဲမှာကြည့်ကြရအောင် 3. ဤသည်ပေါလုကဧဝံဂေလိတရားဒေသနာထဲကထုတ်ရေးသားထားပါတယ်ဘယ်မှာအခြားစာအုပ်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်ကျွန်တော်၏အလငျး၌နထေိုငျသငျ့သ​​ညျမညျသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်နှင့်ကိုဖျောပွ. ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးအခန်းကြီးပေါလုနက်ရှိုင်းသောပစ္စည်းပစ္စယကရှင်းပြသည်, ထိုအခါသူကကျွန်တော်တို့ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသင့်တယ်ပုံကိုဖျောပွ.
ခ. သို့သော်အဆိုပါ Your Mind ၏သက်တမ်းတိုးခြင်းအားဖြင့်အသွင်ပြောင်းမှုကိုခံရ
အဲဒီအစားကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုတညီတည်းခံရ, ကျွန်တော်တို့အသွင်ပြောင်းရပါမည်. အကြှနျုပျတို့အသွင်ပြောင်းသောလမ်းငါတို့စိတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်.
ဘုရားသခင့အသွင်ပြောင်းခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုလား. နှင့်ဤသည်ကိုအသွင်ပြောင်းတူအဘယ်သို့သောအ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်မွကွေီးသည်အဘယ်သို့သောသေခြင်းအားချပြီးတူ, ဘုရားသခငျ့ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်ချပြီး.
c ကို. သင့်ရဲ့စိတ်သက်တမ်းတိုး
သို့သော်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဘုရားရေးရာဝိသေသလက္ခဏာများအပေါ်အသွင်ပြောင်းနှင့်ကိုတင်နိုင်ပါသည်. ပေါလုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတယ်, "အသင်တို့စိတ်နှလုံးကိုသက်တမ်းတိုးခြင်းဖြင့်။ "
ကျနော်တို့ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းပစ္စယစကားကိုနားထောငျလိုကြပါဘူး. သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်သက်တမ်းတိုးခြင်းကိုခံရဖို့လို. ကျွန်ုပ်တို့၏တွေးခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွုမောင်း, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေးခေါ်ပြောင်းလဲမှုရန်လိုအပ်သည်. သငျသညျပွောဆိုသောအခါငါတူမဆိုလိုဘူး, "ငါလက်ျာဘက်လုပ်ဖို့ထင်တာပါသိ, ဒါပေမဲ့…ပြောင်းလဲခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းကို "အပွစျရှိကြောင်းဘယ်သူမျှမကစဉ်းစားတွေးခေါ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတိပကတိလက်ရှိနှင့်အတူသွားဆီသို့ဦးတည်ကျူလုံး​​သည်မှီနှင့်အခွင့်အလမ်းများကိုအပြစ်တရားမှစုကြောင့်ကြည့်. ထိုအသင်တို့အသားကိုသာအကမ္ဘာနှင့်မာရ်နတ်အားဖြင့်လောင်စာဖြစ်ပါတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်နေ့တိုင်းသက်တမ်းတိုးရမည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကြှနျုပျတို့သညျဤမညျသို့လုပျဆောငျဘူး? ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဘုရားသခင့်လမ်းစောင့်သောအားဖြင့်ငါတို့၏စိတ်ကိုသက်တမ်းတိုး. ငါတို့သည်ငါတို့၏နှလုံးထဲကမုသားပြီးနောက်မုသားပြီးနောက်မုသားစကားကိုနားထောငျနေ့စဉ်နေ့တိုင်း, နှင့်ကမ္ဘာ, နှင့်မာရ်နတ်. ကျနော်တို့အသည်းအသန်သူတို့အားမုသာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားလိုအပ်ပါတယ်.
ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၏ရည်မှန်းချက်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ပိုင်းခြားနိုင်ဖြစ်နေလို့ပါ. ဘုရားသခင်နှင့်တစ်ဦးတည်းဘုရားသခင်၏အလိုတော်၏အလိုတော်ကိုယ်တော်နှစ်သက်တော်မူသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့သင်ဦးဆောင်နိုင်. သငျသညျသူကောင်းမကောင်းလက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်စုံလင်သောအဖြစ်သညျဘုရားသခငျ၏အလိုတော်ကိုဖော်ပြထားတယ်သိမြင်. သင်သည်သင်၏စိတ်ကိုသက်တမ်းတိုးအဖြစ်, နှင့်အတွေ့အကြုံဘဝကိုပြောင်းလဲ, သငျသညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားတျောကို၏ကျေးဇူးတော်သည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်. တဖန်သင်တို့အသက်နှင့်ကိုယ်တော်နှစ်သက်တဲ့ဘဝကိုရန်သင့်အားဦးဆောင်သိမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်.
ငါ Word ကိုငါ့ကိုထိပထမဦးဆုံးအကြိမ်သတိရ. ငါ မှစ. အတူတူပင်ဖြစ်ဖူးပါဘူး.
ဒါကြောင့်ခါးသီးလွှတ်နေသောကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုရှိပါတယ်. ဒါကလောကီဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်ဤလောက၏၏နည်းလမ်းများဘက်ကလိုက်လျောညီထွေနေကြတယ်. တပ်မက်သောစိတ်နှင့်ပြည့်ဝ၏ဖြစ်ကြပြီးမတရားသောမေထုန်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကြသူကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုရှိပါတယ်. ဒါကလောကီဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်ဤလောက၏၏နည်းလမ်းများဘက်ကလိုက်လျောညီထွေနေကြတယ်. အထီးကျန်နေသောကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကိုနေဆဲရှိပါတယ်. ကျနော်တို့ကအသင်းတော်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်မဟုတ်, ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ဆောင်များကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ခြင်းကြသည်မဟုတ်. အဲဒီအစားသာကိုယျ့ကိုယျကိုဆော. ဒါကလောကီဖြစ်ပါသည်.
ကျနော်တို့သူတို့အားလောကီနည်းလမ်းများမှလွှဲရမယ်, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သက်တမ်းတိုးခြင်းဖြင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရ. အကြှနျုပျတို့အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုခံရမယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်ဘုရားသခင့်အလိုတော်၏ကျေးဇူးတော်သည်မြင်ရကြလိမ့်မည်.
ကျွန်တော်တို့အလွန်ကြီးစွာသောဘတ်စကက်ဘောကစားသမားများဖြစ်ပုံစံမျိုးရယူနိုင်ရစျယာ, သို့မဟုတ်ကြီးမြတ်နိုင်ငံရေးသမားတွေ, သို့မဟုတ်ကြီးမြတ်အဆိုတော်တွေဟာ. သို့သော်မိမိတို့ကိုယ်၌ရှိသူတို့ကိုအမှုအရာကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းထုတ်သောအရာကိုမဖွစျနိုငျ, သူတို့ကနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မှနှင်ထုတ်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်ကြသည်မဟုတ်အဘယျသို့. သငျသညျမွကွေီးအမှုအရာနဲ့မွကွေီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအနိမ့်ဖို့ရည်မှန်းကြသည်.
ငါတို့ဘုရားသခငျ၏တမသနားတျောမူခွငျးအားဖွငျ့မောင်းထုတ်ခံရဖို့, ဘုရားသခငျသညျကိုးကှယျမှမောင်းထုတ်, ကျွန်တော်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသွင်ပြောင်းခံရဖို့ရှိပါတယ်. ရဲ့ဆုတောင်းစေ.
PhillipBavilla • ဧပြီလ 16, 2014 တွင် 3:11 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်သင်တို့ကိုဖွင့်ခဲ့ကွောငျးတရားဟောချက်ကြိုက်တယ်, သို့မဟုတ်လုပ်ခဲ့တယ်သို့မဟုတ်သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားမိန့်တော်မူပါပြီအခါတိုင်း. ကိုယ်ဖတ်နေခဲ့သည်အဖြစ်, ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်နေတာကိုယ့် kinda မြင်ကြကြောင်းမျိုးစုံသောအရာတို့ကိုမြင်ကြ, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်တစ်ဦးတည်းကလုပ်နေတာဘယ်တော့မှခဲ့သည်, ခရစ်တော်သည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ယောဟနျသကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ 14:6, နှင့်မငြိမ်းမပတ်ပတ်လည်လာသည့်အခါတိုင်း, ခရစ်တော်သည်အစဉ်အမြဲငါလိုအပျကွောငျးတစ်ခုတည်းသောခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏, ရှင်ပေါလု Philipians တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ် 4:13. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အတန်ငယ် kinda ဒီဧဝံဂေလိတရားကို Rap ဂီတပစ္စည်းပစ္စယအဘို့အရာတစုံတခုတယ်, ကိုယ်မဆိုအခြေအနေမှာကိုယ်တော်အဘို့အရဲရင့်စေခြင်းငှါခရစ်တော်အားဖြင့်မောင်းထုတ်ခံရပါ၏, ယင်း၏ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိမရှိ, သို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏အိမ်တွင်၎င်း၏ဖြစ်လျက်ရှိတရားဟောတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆည်းကပ်လုပ်နေတာဟုတ်မဟုတ်. ငါရဲရင့်အဘို့ဆုတောင်းပဌနာ, နှင့် im စိတ်ရှည်ဖို့ကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေ.
Liam • သြဂုတ်လ 19, 2014 တွင် 7:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Awesome ကို, ကြောက်မက်ဘွယ်ပို့စ်ခရီးစဉ်. em လာမယ့်နှင့်အယ်လ်ဘမ်သစ်တို့အတွက် pumped သိမ်းဆည်းထားပါ
Lawrence • သြဂုတ်လ 27, 2017 တွင် 8:42 ညနေ • ပြန်ကြားချက်